सञ्जीवको ब्लग: क्रिकेट स्टेडियमको बहसमा टिप्पणी र जवाफ
विवेकजी, टिप्पणीका लागि धेरै धन्यवाद । यस विषयमा केही प्रस्ट पार्न आवश्यक ठानेँ ।
मैले 'क्यान अफ वर्म्ज' खोल्न खोजेकै हो । खेल र राज्यका बीच गहिरो (र कतिपय अवस्थामा अप्ठेरो) सम्बन्ध छ । यसका पहेलीहरू खुलुन् भन्ने उद्देश्य थियो । र, विशेषगरि निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका भूमिका र सीमितताका विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । कम्युनिस्टहरूले भनेजस्तो राज्यनियन्त्रित अधिनायकवाद र नवउदारवादीहरूले भनेजस्तो बजार नियन्त्रित राज्यव्यवस्थाका विकल्प नखोजी नेपाललाई सुख छैन ।
क्रिकेट वा अन्य यस्तै लोकप्रिय खेल राज्यको प्राथमिकतामा पर्नु हुन्छ कि हुन्न ? वा यसमा करदाताको सम्पत्ति खर्च गर्नु उचित या अनुचित ? भन्ने प्रश्न अस्वाभाविक हैनन् । उदाहरणका लागि ब्राजिलमा आज यस्तै प्रश्न सार्वजनिक चासो र असन्तुष्टिका विषय बनेका छन् । तर, खेल क्षेत्रमा नेपालले गरेको खर्च र लगानिको अवस्था हेर्दा हामीले यो प्रश्नमा अहिले नै धेरै रुमलिन आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । खेलकुद नागरिकको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको विषय हो । यस क्षेत्रमा गरिने सन्तुलित खर्च अनावश्यक नहोला । यस विषयमा संसदमा छलफल गरिनुपर्छ भन्ने तपाईंको सुझावमा पनि मेरो विमति छैन ।
मलाई विनोद चौधरी र उनको व्यावसायिक अभ्यासका बारेमा यथेष्ट जानकारी छैन । त्यसैले मैले प्रस्ताव विशेषको नभएर सोचको चर्चा गर्न खोजेको हो ।
सानो सरकार (small government) का विषयमा म तपाईंसँग सहमत छु । सरकारले निजी क्षेत्रका हरेक भूमिकालाई साँघुरो बनाएर नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न तम्सिने होइन । निजी क्षेत्रसँग राज्यले प्रतिश्पर्धा गर्ने होइन । र फेरि क्रिकेट स्टेडियम बनाउने कुरामा निजी क्षेत्रले खुट्टा हाल्न पाउँदैन भन्ने पनि होइन । निर्माण र सञ्चालन कार्य सरकारका कर्मचारी आफैँले गर्ने होइन । यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अवश्य रहन्छ ।
मेरो असन्तुष्टि यो बहससँग जोडिएका २ प्रमुख सोचाइमा छ ।
१. पहिलो हो -नेपाल अत्यन्त गरिब, कमजोर र असक्षम राष्ट्र हो भन्ने सोच जसले गर्दा राज्यको प्राथमिकताभित्र पर्ने हरेक जिम्मेवारीको प्रसङ्ग उठ्नासाथ विदेशी वा स्वदेशी दाता सहयोगको 'अफर' लिएर मन्त्रालयका ढोकाढोका चाहार्न जान्छन् । मलाई हाम्रो राज्य यति गरिब र कमजोर छ जस्तो लाग्दैन । दाता वा निजी क्षेत्रले गरेका कतिपय योजनाका तुलनामा सरकारी योजनाहरू बढी प्रभावकारी छन् । दाता वा निजी क्षेत्रले सामर्थ्य नपुगेर बीचैमा अलपत्र छोडेका कतिपय परियोजना राज्यले सम्पन्न गरेका उदाहरण पनि हामीसँग छन् ।
२. दोस्रो हो -जसले बनाए पनि भइहाल्यो नि -केको कचकच ? भन्ने तर्क । क्रिकेट वा अन्य कुनै खेलप्रति आमनागरिकको उत्कट चासो छ र यसको समृद्धिलाई राज्यले पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राख्न चाहान्छ भने यसका लागि बनाइने पहिलो र सुविधासम्पन्न (र सम्भवतः एकमात्र) स्टेडियम राज्यको स्वामित्वमा रहनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो । निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मका विभिन्न आयाममा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहन सक्छ -तर यसको स्वामित्व र रेगुलेशनमा राज्य जिम्मेवार रहनुपर्छ । यसो भनेर निजी क्षेत्रलाई अपमान गर्न खोजेको होइन र उसको नाफामूलक स्वार्थ्यको आलोचना गर्न खोजेको पनि होइन । मेरो आशय यतिमात्र कि क्रिकेटको विकासको प्रारम्भिक चरणमा हामीलाई अहिले नाफा होइन अपनत्व चाहिएको छ । नेपालका व्यापारिक घरानाले चलाएका विद्यालय र अस्पतालको सञ्चालनलाई हेर्ने हो भने ति समाजप्रतिको जिम्मेवारीप्रति सचेत रहेको पाइन्न । यी क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको संलग्नताप्रति मेरो आपत्ती छैन, तर क्रिकेटमा हामीलाई अहिले चाहिएको यस्तो व्यावसायिकता होइन भन्ने लाग्छ ।
यहाँको कमेन्टका लागि फेरि पनि धन्यवाद ।
Posted by Sanjeev at 8:20 AM